Man United oo u soo bandhigtay € 150m xiddiga Barcelona Ansu Fati - Radio Risaala: Somali News Online
Home Ciyaaraha Man United oo u soo bandhigtay € 150m xiddiga Barcelona Ansu Fati
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay diyaar u aheyd inay bangiga u jabiso da ‘yarka Barcelona Ansu Fati.
Sida laga soo xigtay Sport Witness, Red Devils ayaa ku dalbatay 150 milyan oo ginni wiilkaan, laakiin dalabkaas waxaa diiday kooxda reer Catalans.
Barcelona waxay dooneysaa inay Ansu Fati ku sii heyso Camp Nou, go’aankoodana ma uusan jabin xitaa ka dib markii Manchester United ay la timid dalabkii ugu weynaa.
Ansu Fati wuxuu ku biiray Barcelona isagoo 10-sano jir ah kana yimid Sevilla sanadkii 2012.
Markii ugu fiicneyd ee uu ka soo dhex muuqdo safka koowaad waxay aheyd sanadka 2019.
Dhab ahaan, ciyaaryahanka reer Spain ayaa sii waday inuu safto kulankiisii ugu horeysay ee kooxda ka hor inta uusan u soo muuqan xiddig weyn oo saameyn leh.
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay xiiseyneysay ciyaaryahanka tan iyo markaas, laakiin Barcelona ayaa ku adkeysatay inuusan iib aheyn.
Red Devils ayaa isbadal muuqda ku sameysay istiraatiijiyadooda suuqa kala iibsiga tan iyo markii uu yimid Ole Gunnar Solskjaer.
Waxay bartilmaameedsanayeen ciyaartoy da ’yar oo tayo leh si ay laf dhabar ugu noqdaan kooxda sannadaha soo socda.
Tababaraha reer Norway wuxuu kormeeray dhiirrigelinta hibooyin argagax leh oo uu ku arkay wiilashada dhalinyarada wuxuuna sidoo kale maal-galiyay dhalinyaro hibo leh sida Amad Diallo iyo Facundo Pellistri.
Ma cadda markii ay Man United miiska soo saartay dalabka Ansu Fati, laakiin waxaa laga yaabaa inay dhacday xagaagii hore.
Previous articleImaaraadka Carabta oo DFS ugu yeertay Dawlad KMG ah
Next articleVan de Beek oo lasiiyay talo uu ku badbaadin karo mustaqbalkiisa